‘ အပြစ်တင်ချင်ရင် ကျွန်တော့ကိုပဲ အပြစ်တင်ပါ ‘ – အဆုံးအဖြတ် ပင်နယ်တီ လွဲခဲ့တဲ့ ကီပါဖက်မှ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးလိုက်တဲ့ တူချယ် - xyznews.co
‘ အပြစ်တင်ချင်ရင် ကျွန်တော့ကိုပဲ အပြစ်တင်ပါ ‘ – အဆုံးအဖြတ် ပင်နယ်တီ လွဲခဲ့တဲ့ ကီပါဖက်မှ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးလိုက်တဲ့ တူချယ်
မနေ့ညက ဝင်ဘလေကွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ လီဗာပူး အသင်း ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာ ၁၁ – ၁၀ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရပြီး ၊ သမိုင်း တလျှောက် ၁၀ ကြိမ်နဲ့ အများဆုံး ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပွဲအပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က ဂိုးသမား လူစားလဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ ၄င်းနဲ့သာ သက်ဆိုင်တာကြောင့် ၄င်းကိုသာ အပြစ်တင်ဖို့ ပြောလိုက်ပြီး ၊ ပင်နယ်တီ လွဲခဲ့တဲ့ ကီပါ က လုံးဝ အပြစ်မရှိကြောင်း အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ဟုတ်ပါတယ် ။ ကီပါ အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေက ပြင်းထန်လွန်းပါတယ် ။ သူ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါ ။ ဒါပေမယ့် အပြစ်တော့ လုံးဝ မတင်ခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲက အတိုင်း ၊ သူ့ကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် မတိုင်မီ လူစားလဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ”
” ကီပါ ဟာ အသင်းသားတွေနဲ့ အတူ နေ့စဉ် ပင်နယ်တီဖမ်း လေ့ကျင့်သလို ၊ သူတို့တွေလည်း ကီပါ ပင်နယ်တီ ဖမ်းတာ ဘယ်လောက်တော်တဲ့ အကြောင်း သိထားကြပါတယ် ။ သူဟာ ပွဲအများစုကို တာဝန်ယူရတဲ့ အက်ဒူထက် ပင်နယ်တီ လေ့ကျင့်ချိန် ပိုရပါတယ် ။ လူတိုင်း က သူ ဘယ်လောက်တော်တယ် ဆိုတာ သိသလို ၊ သူ့ကို ပင်နယ်တီမှာ ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်ရ ခက်တယ် ဆိုတာလည်း သိပါတယ် ။ ”
” ဒါကြောင့်မို့ သူဟာ ဒီနေ့ပွဲက ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ခွင့် ရခဲ့တာပါ ။ ကံဆိုးစွာနဲ့ သူ ပင်နယ်တီ တလုံးမှ မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ လီဗာပူးရဲ့ ပင်နယ်တီ ကန်ချက် အားလုံး က ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတော့ သူ့အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေက ပြင်းထန်လွန်းပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အသင်းသားကမှ သူ့ကို အပြစ်မတင်ကြပါဘူး ။ ”
” ကျွန်တော် ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက် တခု ချပြီဆိုရင် နောက်မလှည့်တမ်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာပါ ။ ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လိုလားမှ ချတာပါ ။ ဒီ ဆုံးဖြတ်ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး မဆန်းစစ်သလို ၊ နောင်တလည်း မရပါဘူး ။ ”
” အက်ဒူကို လူစားလဲလိုက်လို့ ၊ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်လိုကြိုသိနိုင်မှာလဲ ? အခြေအနေကိုက ဒီလို ဖြစ်နေတာပါ ။ ဒီတော့ ကီပါ အပေါ် အပြစ်တင်စရာ အကြောင်း ဘာမှ မရှိပါဘူး ။ အပြစ်တင်ချင်ရင် ကျွန်တော့ကို အပြစ်တင်ပါ ။ ကျွန်တော်ကသာ ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချတဲ့သူပါ ။ ”
” တခါတလေမှာ ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အလုပ်ဖြစ်တာ ရှိမယ် ၊ တခါတလေမှာလည်း အလုပ် မဖြစ်ပါဘူး ။ ကီပါ ဟာ အဆုံးအဖြတ် ဖြစ်စေမယ့် အမှားအယွင်း တခုသာ ကျူးလွန်ခဲ့မိပါတယ် ။ ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ နောင်တရစရာ လုံးဝမရှိပါဘူး ။ ကျွန်တော့ကိုသာ အပြစ်တင်ပါ ။ ကျွန်တော် ဒါကို တာဝန် အပြည့် ယူပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article ဖလား ယူတဲ့ လီဗာပူး ၊ ၂ ခါ မမှားတဲ့ နာပိုလီ ၊ လာလီဂါ ရဲ့ စံချိန်ရှင် လူငယ်လေး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article ကာရာဘောင်ဖလားဖိုင်နယ်မှာ ဟီးရိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ပွဲအပြီးမှာ ယာဂန်ကလော့ သူ့ကို ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ကယ်လီဟာ